1 Samuel 8 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German German Sign Language Greek Guarani Guatemalan Sign Language Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maya Mexican Sign Language Myanmar Nepali Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Persian Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Quebec Sign Language Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Taiwanese Sign Language Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zulu
8 O wee ruo na ozugbo Samuel mere agadi, ọ họpụtara+ ụmụ ya ndị ikom ka ha bụrụ ndị ikpe Izrel. 2 Aha ọkpara ya bụ Joel,+ aha nwa ya nwoke nke abụọ bụ Abaịja;+ ha nọ na Bia-shiba na-ekpe ikpe. 3 Ụmụ ya ejeghị ije n’ụzọ o jere,+ kama ha na-achọ uru na-ezighị ezi,+ na-erikwa ngarị+ ma na-agbagọ ikpe.+ 4 Ka oge na-aga, ndị okenye niile nke Izrel+ zukọtara wee bịakwute Samuel na Rema, 5 sị ya: “Lee! Gị onwe gị emewo agadi, ma ụmụ gị adịghị eje ije n’ụzọ i jere. Họpụtara anyị eze+ ga na-ekpe anyị ikpe dị ka mba niile ọzọ.” 6 Ma ihe ahụ dị njọ n’anya Samuel na ha sịrị: “Nye anyị eze ga na-ekpe anyị ikpe.” Samuel wee malite ikpeku Jehova ekpere.+ 7 Jehova wee sị Samuel:+ “Gee ntị n’olu ha n’ihe niile ha na-agwa gị;+ n’ihi na ọ bụghị gị ka ha jụrụ, kama ọ bụ m ka ha jụrụ ịbụ eze+ ha. 8 Dị ka ihe niile ha mere si dị, malite n’ụbọchị m si n’Ijipt kpọpụta ha+ ruo taa, na-ahapụ m+ ma na-efe chi ọzọ dị iche iche,+ ọ bụ otú ahụ ka ha na-emekwa gị. 9 Ma ugbu a, gee ntị n’olu ha. Ọ bụ naanị na ị ga-adọsi ha aka ná ntị ike, gwakwa ha ihe ruuru eze ga-achị ha.”+ 10 Samuel wee gwa ndị ahụ na-achọ ka o nye ha eze ihe niile Jehova kwuru. 11 O wee sị: “Nke a ga-abụ ihe ruuru+ eze ga na-achị unu: Ọ ga-akpọrọ ụmụ unu ndị ikom+ wee mee ka ha bụrụ ndị na-anọkwasịrị ya n’ụgbọ ịnyịnya,+ meekwa ka ha soro ná ndị na-agba ịnyịnya ya,+ ụfọdụ ga na-agbakwa ọsọ n’ihu ụgbọ ịnyịnya ya;+ 12 ọ ga-ahọpụtakwara onwe ya ndị isi nke otu puku otu puku ndị agha+ na ndị isi nke ndị agha iri ise iri ise,+ họpụtakwa ụfọdụ ka ha na-akọrọ ya ubi,+ na-ewekwara ya ihe ubi,+ na-akpụkwara ya ngwá agha+ na ngwá ụgbọ ịnyịnya.+ 13 Ọ ga-akpọrọ ụmụ unu ndị inyom ka ha bụrụ ndị na-esi mmanụ na ndị na-esi nri na ndị na-eme achịcha.+ 14 Ala unu na ubi vaịn unu+ na ubi oliv unu,+ ndị kasị mma, ka ọ ga-ewere nye ndị na-ejere ya ozi. 15 Ọ ga-ewerekwa otu ụzọ n’ụzọ iri nke mkpụrụ si n’ubi unu na nke ubi vaịn unu,+ ọ ga-ewerekwa ha nye ndị na-eje ozi n’obí ya+ nakwa ndị na-ejere ya ozi. 16 Ndị ikom na-ejere unu ozi na ndị inyom na-ejere unu ozi ka ọ ga-akpọrọ, werekwa ìgwè ehi unu kasị mma na ịnyịnya ibu unu, meekwa ka ha na-arụrụ ya ọrụ.+ 17 Ọ ga-ewere otu ụzọ n’ụzọ iri nke ìgwè ewu na atụrụ unu,+ unu onwe unu ga-abụkwa ndị na-ejere ya ozi. 18 Unu ga-eti mkpu ákwá n’ụbọchị ahụ n’ihi eze unu,+ bụ́ onye unu onwe unu họọrọ, ma Jehova agaghị aza unu n’ụbọchị ahụ.”+ 19 Otú ọ dị, ụmụ Izrel jụrụ ige ntị n’olu Samuel+ wee sị: “Ee e, kama ọ bụ eze ga-achị anyị. 20 Anyị onwe anyị ga-adịkwa ka mba niile ọzọ,+ eze anyị ga na-ekpekwa anyị ikpe, na-agakwa n’ihu anyị ma na-eburu anyị agha.” 21 Samuel wee gee ntị n’okwu niile ụmụ Izrel kwuru; o wee gwa ya Jehova.+ 22 Jehova wee sị Samuel: “Gee ntị n’olu ha, meekwa ka eze chịwa ha.”+ Samuel wee sị ụmụ Izrel: “Onye ọ bụla laa n’obodo ya.”